Ivan Franko National University nke Lviv - Study na Ukraine
Ivan Franko National University nke Lviv Details
acronym : IFN
tọrọ ntọala : 1661
Echefukwala -atụle Ivan Franko National University nke Lviv
Emetụta Ivan Franko National University nke Lviv
The Ivan Franko National University nke Lviv bụ a oge gboo alụmdi agụmakwụkwọ ka elu na-edi omenala na ndị dị ike na nkà mmụta sayensị na ụlọ akwụkwọ incorporating oge a otutu na ọnọdụ. The University nwere ihe pụrụ iche ozi:
kọwaa ma na-eme muta na nkà mmụta sayensị na ụkpụrụ;
n'ịwa mgbanwe ndị dị mkpa na a region, mba ma ọ bụ n'ụwa;
-etolite iche - a andikama ọgụgụ isi na otutu nwere.
Ivan Franko National University nke Lviv eme na ndabere nke na-echebekwa Ukrainian omenala na-emepe emepe na mba nsụhọ na njirimara.
Ivan Franko National University nke Lviv esetịpụ 4nke larịị nke nzere ntozu nke Ozi nke Education na Science nke Ukraine na-azụ ọkachamara na Ikikere mmemme: 9 specialties nke agụmakwụkwọ-proficiency larịị 'keobere ọkachamara', 49 nzere bachelọ omume, 82 specialties 'ọkachamara' na 87 specialties '-nwe' na 17 alaka nke ihe ọmụma.
na 2014-2015 Ozi nke Education na Science nke Ukraine ikikere 4 'Eto eto ọkachamara' ubi nke ọmụmụ, accredited 7 'Okokporo' specialties, 3 'Ọkachamara' specialties, na 3 '-Nwe-' specialties. The University ụgbọ oloko ọkachamara n'ime 144 'Ọkachamara' specialties na 161 '-Nwe-' specialties. 32 ọhụrụ specialties ya ekechi n'ime University ezi ikike iche. Anyị na-emepe emepe n'ihu na-enye anyị n'ọdịnihu ụmụ akwụkwọ ọbụna a wider oke: na 2015 8 specialties n'ime ngalaba nke Biology, geology, Economics na Applied Mathematics na Informatics e rubere-ikikere na accredited.
taa 19357 ụmụ akwụkwọ na-amụ na Lviv University nke nke 10202 bụ ala-nọgidere na-enwe; 4332 ndị mmadụ na-arụ ọrụ n'ebe a nke nke 2056 bụ nkụzi; 281 ndị mmadụ na-arụ ọrụ na Mahadum na nkà mmụta sayensị
na nnyocha ngalaba. 220 dọkịta na 1119 -Aga ime na-akụziri ebe a; si ha 203 ndị mmadụ ka ọnọdụ nke Prọfesọ na 794 ndị mmadụ na-docents.
Ivan Franko National University nke Lviv mkpa bụ na nkà mmụta sayensị ọrụ. na 2014 na University mụụrụ nnyocha sayensị na 35 isi na 10 etinyere isiokwu mma site Ministry of Education na Science nke Ukraine, nke a 3 e nyere ha iwu site State Agency of Science, Innovations na Informatization nke Ukraine, 6 si mesoo ichebe ihe nke dịịrị mba nketa Ukraine, 3 nọkwa na-enweta ego oru na 8 Grants nke International Funds.
Ivan Franko National University nke Lviv bụ a nchoputa na nkwusa nke 44 na nkà mmụta sayensị Oghere Usoro akwụkwọ. Visnyk Universytetu (University ngbasa):Biology Series bụ nke na ndepụta nke mba ọkachamara editionts Web of Science. Journal of Physical Studies bụ otu n'ime 42 magazin na Ukraine na ọ bụ nke a bibliographic nchekwa data Scopus.
Anyị na-aga na anyị rụzuru. A onodu ọ ga-abụ Nde ka ịgbanwee si quantitative ka qualitative egosi: Ya mere ndi University akowa maka onwe ya emeri na nzube nke:
ọbọ kasị elu ụkpụrụ na ụwa ọnụ nke nnyocha sayensị;
enye elu àgwà nke izi usoro;
ike ọrụ nke University ke otu;
akpụ ọgụgụ isi J.Randall;
-emepe emepe na omenala na gburugburu ebe obibi;
akpụ na-emepe emepe iche na-elekọta mmadụ ụkpụrụ nduzi nke onye;
-emepe emepe na-eto eto akụkọ ihe mere eme nsụhọ na mba njirimara;
-amụba otutu ikike, ịzụ ukwuu ruru eru pesonel ke ina site na ọha mmadụ na steeti;
University ika nkwalite, akpụ a n'otu nghọta nke University na Ukraine na ná mba ọzọ;
anyịnwa ịhụkwu University mwekota n'ime ụwa mmụta ma na nkà mmụta sayensị na ohere;
oge a na-elekọta mmadụ, ọmụma na nkwurịta okwu na mmepụta akụrụngwa.
Admission usoro na Ivan Franko National University nke Lviv
N'ihi emetụta Ivan Franko National University nke Lviv mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na- ide online via Ukrainian Admission Center.
Faculty of Applied Mathematics na Informatics
Faculty of arụzi ụgbọala na Mathematics
Faculty of Foreign Asụsụ
The akụkọ ihe mere eme nke University na-aga azụ ka narị afọ nke 17.
na 16nke - 17nke ọtụtụ narị afọ, okpukpe fraternities bụ omenala emmepe na Ukrainian ala. Na nkwado nke burgers na ndị ụkọchukwu, ha aka gbasaa echiche nke ụmụ mmadụ na ndị ọkà mmụta sayensị na-enweta ego a net nke ụlọ akwụkwọ. Ndị kasị ochie fraternity na Ukraine bụ Stauropegic fraternity na Lviv, nke ghọrọ a ma ama Ukrainian omenala n'etiti. A fraternity akwụkwọ e mepere Lviv na 1586. The Church Slavonic, Greek, Latin na Polish asụsụ nakwa dị ka mgbakọ na mwepụ, ụtọ asụsụ, ihapu otutu okwu, astronomy, nkà ihe ọmụma na ndị ọzọ na ọzụzụ e ziri ebe a. Lviv fraternity ndị òtù ọbụna na-eme atụmatụ ime ka ndị na "himnasion" (ka ha na-akpọ nke a akwụkwọ) n'ime a mahadum. Dị otú ahụ pụtara ìhè ọgụgụ nke Ukraine omenala mbubreyo 16 ka n'oge 17nke na narị afọ dị ka Lavrentiy Zyzaniy (pickaback) na nwanne ya nwoke Stepan, Kyrylo Stavrovetskyi, Ivan Boretskyi na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ma a ruo n'ókè na Lviv fraternity akwụkwọ.
Site n'etiti iri na asaa na narị afọ, e nweghị akwụkwọ dị elu na Ukraine. Polish gentry na-emegide ihe e kere eke nke akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, nke nwere ike ibu a dị ize ndụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na omenala n'etiti. Ukrainian na-eto eto na-enweta agụmakwụkwọ ka elu na Kraków na ndị ọzọ na European mahadum.
N'okpuru Treaty nke Hadiach (1658) n'etiti Ukraine na Polish-Lithuanian Commonwealth, abụọ mahadum ndị a ga-emeghe on Ukrainian ala: onye na Kyiv na ndị ọzọ na ihe ọ bụla kwesịrị ekwesị ebe ọ. The abụọ mahadum e kwere nkwa ahụ ikike na Cracow University nwere. Akpa okirikiri nke Commonwealth chere na nrụgide ahụ nke ụfọdụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọnọdụ ndị mba abụọ na mahadum nwere ike guzobere Ukraine. N'otu oge ahụ, ndị Jesuit Order na-azara ọnụ Katọlik na Ukraine pinned oké enwe olileanya na ha center ke Lviv. Ndị Jesuit pụtara na Lviv na ngwụsị 17nke na narị afọ. na 1608, ha meghere ha onwe ha ụlọ akwụkwọ ebe a. Site n'etiti iri na asaa na narị afọ ụlọ akwụkwọ a jụrụ, ma ọ napụtara n'aka mbibi ebe ọ bụ site Polish magnates. Ndị Jesuit ghọtara na o na-ekpebi ihe a mahadum dabere na ha ụlọ akwụkwọ dị na Lviv. Ya mere, ha mgbe niile choro iji tọghata ha ụlọ akwụkwọ, n'ebe na-ulo mmuta. Mgbe ugboro ugboro na-arịọ, on January 20, 1661, Eze Jan II Kazimierz bịanyere aka a n'akwụkwọ iwu arịọrọ ahụ akwụkwọ n'okpuru nkwado nke Lviv Jesuit Collegium, "Nsọpụrụ nke Academy na aha nke University" na nri-akụziri niile mahadum achị ma emekwa ka o nweta degrees nke okokporo, licentiate, nwe-na doctorate. Otú ọ dị, ozugbo mgbe ịbanye ichata, ihe e kere eke nke Academy e ike na-emegide Cracow University na ụfọdụ na-akwanyere ùgwù isi. N'agbanyeghị ihe mgbochi ndị, na ọmụmụ na Lviv University e duziri na nlereanya nke ndị ọzọ European academies. mgbe e mesịrị na 1758, Polish King Augustus III mma n'akwụkwọ iwu enyere site na Jan II Kazimierz on January 20, 1661. Si ya tọọ ntọala ruo mgbe 1773, Lviv University bụ kpam kpam n'okpuru akara nke Jesuit Order na ọ subordinated ka Jesuit General na Rom. The University e gawa site Rector. Isi ụlọ nke ulo mmuta dị nso Cracow n'okporo ámá n'obodo center. The University wuru ma zụta ọhụrụ ogige, nwere Ọbá akwụkwọ na ndị kasị ibu ebi akwụkwọ ụlọ na Lviv.
The University gụnyere abụọ ngalaba (ikike iche): nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe. E nwere otu tupu-mahadum ụlọ akwụkwọ maka ndị na-achọ inwere n'ihu n'ihe ọmụmụ ha na mahadum.
Ihe ndị e dekọrọ na-egosi na 1667, banyere 500 ụmụ akwụkwọ na-amụ na asatọ nkụzi na-arụ ọrụ na nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe ngalaba. Ke n'etiti iri na asatọ na narị afọ, ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ na ụba na- 700, ọnụ ọgụgụ nke ndị nkụzi na- 15-17. Okporo osisi mejupụtara 75% nke ụmụ akwụkwọ, ndị fọdụrụ bụ ndị nnọchiteanya nke Ukraine na ndị ọzọ na agbụrụ dị iche iche.
The muta usoro na Lviv University E duziri dị ka Jesuit akwụkwọ omume mepụtara ná ngwụsị afọ iri na isii na narị afọ. Ịrịba mgbanwe usoro ihe omume bu nani n'etiti afọ ndị iri na asatọ na narị afọ. Na ngalaba nke nkà ihe ọmụma, tumadi na nkà ihe ọmụma usoro Aristotle a kụziiri, bụ nke gụnyere mgbagha, physics na metaphysics; ekwu okwu nke physics, ọcha nke mgbakọ na mwepụ, astronomy, bayoloji, Meteorology e weere; ekwu okwu nke metaphysics - okwu banyere akparamàgwà na ụkpụrụ ọma. E wezụga, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala, Greek na ndị ọzọ na-achị na a kuziri. Na ngalaba nke nkà ihe ọmụma, ọmụmụ were abụọ ma ọ bụ atọ. Mgbe-emecha na-amụ n'ụlọ a ngalaba, onye nwere ike na-a nkà mmụta okpukpe muta. Na ngalaba nke nkà mmụta okpukpe, ọmụmụ were afọ anọ. Church akụkọ ihe mere eme, Old na New Testament, ekwesi olu ike na nke omume nkà mmụta okpukpe, Canon iwu, casuistry, asụsụ Hibru na kụziri na a ngalaba. All mahadum ọmụmụ na kụziri site professors.
Na nkera nke abụọ nke iri na asatọ na narị afọ ruru ka mmepe nke nkà mmụta sayensị na ihe ọmụma, mgbanwe ụfọdụ weere ọnọdụ na muta usoro nke mahadum. na 1744 na mgbakọ na mwepụ ngalaba e meghere, gawa site F. Grodzicki onye bụ onye na-ede akwụkwọ nke a akwụkwọ ọgụgụ banyere ije na mgbakọ na mwepụ. The Mathematical Physics laabu na ndị University Astronomical Observatory meghere. Polish, French, German, ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme e ziri dị ka iche iche na-achị. Ọma-mara ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ n'ebe a: ọkọ akụkọ ihe mere K. Niesiecki, mathematicians F. Grodzitski na T.Siekierzyński, onye so dee G.Piramowicz, ọha na ọnụ ọgụgụ, -ede uri, onye edemede na ọkà ihe ọmụma m. Krasicki. Ndị dị otú ahụ a ma ama ndị mmadụ dị ka m. Giesel, M.Slotvynskyi, Ya.Bohomolovskyi na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị akwụkwọ na mahadum.
Mgbe na mgbasa nke Jesuit Order na 1773, Lviv University e mechiri. N'oge na-adịghị, Otú ọ dị, a ọnụ ọgụgụ nke nkeji nke Jesuit Academy tọrọ ntọala maka Emperor Joseph University ke Lviv.
na 1772, Halychyna ghọrọ akụkụ nke Alaeze Ukwu Austrian. Iji iwete n'etiti na germanize a si ọtụtụ mba ala, ndị ọchịchị nke Eze Ukwu Joseph II ụgwọ dị ukwuu anya na muta, gụnyere elu-akụziri. Lviv envisaged a mahadum. Nnọchi nke ozizi ọnọdụ na ngalaba a ga-mere site mpi mbanye nke oghere mmeri n'agbanyeghị mba ha na ekpemekpe.
The mahadum e nyere ogige nke mbụ Atọ n'Ime Otu Order na Krakivska n'okporo ámá. The ọchịchị n'akwụkwọ iwu nke 17 June 1784 -akọwa pesonel nke ngalaba na mahadum mmefu ego. Na October nke otu afọ, a ubre na a ndu n'ihi na mahadum ochichi e nyere. Na ubre e kwuru na Lviv University gụnyere nke anọ ezi ikike iche: nkà ihe ọmụma, iwu, ọgwụ na ahụ ike na nkà mmụta okpukpe. University nraranye ada itie ke November 16nke, 1784.
Na oge n'etiti 1805 na 1817, a akwụkwọ arụ ọrụ na mbara èzí nke Lviv University. Nke a bụ n'ihi na mgbanwe nke elu-akụziri na Austrian ala. The analysis na-egosi na ọtụtụ na-achị nọgidere na-akụzi n'ụlọ mahadum akporo. Otu ezi ikike iche gara n'ihu n'ọrụ ha.
The kasị elu achị Isi nke mahadum bụ Sineti (consistory). O nwere a Rector, deans na ndị agadi (ndị kasị ochie na onye kasị nwee ahụmahụ professors). Sineti kpebiri isi nsogbu echiche na n'ozuzu management nke mahadum. All ndị ọzọ na-egbo site deans na-arụ ọrụ dị ka ndị nduzi nke ezi ikike iche. Ọ ga-kwuru na mahadum nwere ụfọdụ obodo kwụụrụ.
The ụlọ akwụkwọ dị elu guzosie ike 1784 -ahụ maka akwadebe ụmụ akwụkwọ maka ịbanye mahadum. Ọzụzụ e ekenịmde ke German na Latin na were 5 afọ. Na afọ atọ mbụ niile ụmụ akwụkwọ na-eji ngalaba nke Philosophy omume na ọmụmụ ha. Mgbe anyị gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nke Philosophy, ụmụ akwụkwọ ma gaa n'ihu n'ihe ọmụmụ ha n'ụlọ otu ngalaba iji hụkwuo ihe ọmụma ha on a kpọmkwem isiokwu ma ọ bụ họọrọ otu nke elu ikike iche - iwu, nkà mmụta ọgwụ ma ọ bụ nkà mmụta okpukpe, ebe ọzụzụ were afọ anọ. Izi e ekenịmde ke Latin, Polish na German. na 1825 na ngalaba nke Polish asụsụ na akwụkwọ e meghere.
na 1787, Studium Ruthenum arụ ọrụ na Theological Faculty. Ọ bụ a na-afo N'ezie ekenịmde ke Ukraine. Ọ gara n'ihu ya ọrụ ruo mgbe 1806. Ndị dị otú ahụ a ma ama onu ogugu enwere ugbua nke Ukraine mba dị Markiyan Shashkevych, Yakiv Holovatskyi, Yuriy Venelin (chakoo) na-metụtara Lviv University of mbụ ọtụtụ iri afọ nke iri na itoolu na narị afọ.
Physics na Lviv University na nkera nke abụọ nke iri na asatọ ka n'oge iri na itoolu na narị afọ e anọchi anya ya prọfesọ F. Güssman, m. Martinovics, A. Hiltenbrand, Ivan Zemanchyk, A. Gloisner, A. Kunzek na A. Zawadzki, ma ole na ole n'ime ha nwere na nkà mmụta sayensị rụzuru na ubi nke anụ ahụ sayensị. Ọ kachasị, Okanmuta. m. Martinovics (1755-1795) dere a dị mpịakọta abụọ akwụkwọ ọgụgụ banyere ibuo physics. A ma ama ọkà mmụta sayensị nke 1780s, F. Güssman (1741-1806) bipụtara na Vienna a dị mpịakọta abụọ nkọwa nke afọ ụwa na okwu nke physics. Ivan Zemanchyk nyere nnọọ aka dịkwuo ego nke akụrụngwa dị na ngalaba. Prof. A.Kunzek (1795-1865), nke nwere mmasị n'ebe physics na mgbakwunye na mbara igwe na ọbụna kụziri mgbakọ na mwepụ na oge gboo philology, dere na nkà mmụta sayensị akwụkwọ na asaa akwụkwọ (e.g, "Ozizi Ìhè", "Popular Astronomy,"" Popular Science of Meteorology "wdg).
Schiverek (1742-1807) ekedi akpa prọfesọ nke botani na onwu na Lviv University. Ya isi rụzuru agụnye ọmụmụ on ịnweta mmiri ego na Subcarpathia na guzosie ike Botanical Garden.
Otu n'ime ihe mbụ ọkachamara mathematicians na Mahadum bụ F. nsọ (1761-1831), bụ onye dere, otu akwụkwọ ọgụgụ banyere mgbakọ na mwepụ. A ntuziaka "Ihe nke Dị Ọcha arụzi" wetara otuto pụtara ìhè Austrian mgbakọ na mwepụ L. Schulz nke Straßnitzki(1803-1852), ndị na-akụzi na mahadum na 1834-1838. The isiokwu nke eke akụkọ ihe mere eme a kụziiri na Mahadum site Prof. B. Hacquet (1740-1815). Ọ bụ onye ọsụ ụzọ na ubi nke geology na Halychyna.
Na ubi nke nkà ihe ọmụma, aha Petro Lodiy (1764-1829) ga-kwuru. O dere, sị akwụkwọ ọgụgụ gụnyereMetaphysics na Logic Ntuziaka. A ọnụ ọgụgụ nke ọrụ on nkà ihe ọmụma na-dere m. Hanus (1812-1869). L. iri Mark (1753-1814) ekedi akpa prọfesọ nke akụkọ ihe mere eme na mahadum. Ọ bụkwa otu ọkachamara na ubi nke inyeaka akụkọ ihe mere eme ọzụzụ ma na dere a akwụkwọ ntuziaka na nke a nke. G. Uhlich (1743-1794) ekedi akpa prọfesọ nke inyeaka akụkọ ihe mere eme ọzụzụ. Ọ tọrọ ntọala a na-agụ nnukwu ọnụ ụlọ na Lviv, dere otu akwụkwọ ọgụgụ banyere diplomacy na numismatics. Ọ bụkwa na-ede akwụkwọ nke a ọnụ ọgụgụ nke ọrụ on akụkọ ihe mere eme. The prọfesọ nke akụkọ ihe mere eme n'ozuzu na akụkọ ihe mere eme nke Austria J. Mauss (1778-1856) bụ nnọọ ewu ewu n'etiti ụmụ akwụkwọ.
Oge gboo philology na 1784 kụziiri ya ihe V. ọ (1763-1816), onye na mgbakwunye na mmụta asụsụ bụ mmasị na nsogbu nke aesthetics na-ebipụta a dị mpịakọta abụọ collection nke onwe ya poems. O dekwara ọtụtụ ọrụ na ihe ndị mere e ji amụ. n'etiti ndị ọkà mmụta asụsụ, professors m. Pollak (1785-1825) na Leopold mgbasa (1757 - 1807) E kwesịkwara ntị.
Na 1820-30s, research na mpaghara akụkọ ihe mere eme na Humanities di ndu. A na-amụrụ nke University I.Mohylnytskyi kwadebere mbụ Ukrainian ụtọ asụsụ bipụtara na Halychyna. O wee si na 1829. ya okwu mmalite na Ruthenian Languagedị nkenke nnyocha nke akụkọ ihe mere eme nke Ukraine. Ọ na-ekwukwa Ukraine asụsụ dị ka onwe n'etiti East Slavic asụsụ. Prọfesọ nke Lviv National University
I.Lavrivskyi weere a mpịakọta isii nke Ukraine-Polish-German akwụkwọ ọkọwa okwu ma sụgharịa The Akụkọ nke gara Years n'ime Polish. A ịrịba onyinye maka ọmụmụ nke obodo akụkọ ihe mere eme e mere site prọfesọ M.Hrynevetskyi. Ọ anakọtara incunabula na ndị ọzọ oge ochie ncheta.
Iwu sayensị nke oge ahụ dabeere na-akpọ akụkọ ihe mere eme akwụkwọ nke iwu. Prof. J. Winiwarter ihe ndị pụrụ na-eme nchọpụta na ubi nke obodo iwu. Ọ rụrụ ọrụ Ukraine si 1806 ka 1827 na bipụtara ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị akwụkwọ.
Ihe ndị mere Polish Ntọhapụ nke Mba nsogbu nke 1830-1831 na mgbanwe nke 1848 a dị ịrịba ama mmetụta na mmepe nke Lviv University. Ụmụ akwụkwọ nke mahadum abuana ifịk ifịk ke omume. N'oge na-insurrection nke 1848, mahadum ụlọ ọkụ ala. Ya bara uru na nkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ, nke guru ihe karịrị 51 puku mpịakọta, e bibiri. Bara uru odide na-edifọp ala. Ebe ọ bụ na mahadum ngwá e idiọk mebiri emebi, na e nweghị ọmụmụ na-aga ruo ogologo oge.
N'oge nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ, mahadum ụlọ ọrụ gbasaa. ebe ọ bụ na 1851, na University e odude ke a ụlọ na St. Mykolay Street (ugbu ọ bụ Hrushevskyi Street). na 1891, -esonụ ngo nke atụpụta ụkpụrụ ụlọ J.Braunseis, a iche iche ụlọ maka chemical, geological na mineralogical nakwa n'ihi pharmacological institutes e guzobere Dlugosz Street (ugbu SS. Cyril na Methodius Street). na 1894, ogige maka ahụ e hiwere ọhụrụ ike na ngalaba on Pekarska Street e dechara. na 1905, ọhụrụ ogige e wuru maka University Library.
Ihe kasị achị Isi nke mahadum n'oge e Ọmụmụ maka otu ihe esịnede a Rector, a osote Rector, deans, ngalaba na-anọchite anya na a odeakwụkwọ. Ndị dị otú ahụ akụkụ nke mahadum ndụ dị ka na-amụ usoro, research, na nkà mmụta sayensị degrees, na nhazi omume nọ iru eru nke Sineti.
E nwere ndị atọ ezi ikike iche na Lviv mahadum fọrọ nke nta ruo mgbe ọgwụgwụ nke iri na itoolu na narị afọ: na ikike iche nke Iwu, Nkà ihe ọmụma na Theology. Ewere n'ime akaụntụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na obodo na-ebute ụzọ, ikike nke Iwu ahụ na-eduga na mahadum. na November 1891, mgbe ogologo oge, Austria Emperor Franz Josef m nyere iwu ka oghere na ahụ ike na ngalaba. The Emume solemnly ẹkenịmde ke September 9nke1894.
Onye ọ bụla n'ime ihe anọ ahụ ikike iche e eduzi a n'ìgwè e jikọrọ - professors nke ngalaba Council, ma ọ bụ a panel, bụ nke gụnyere a diin, niile ọkachamara na abụọ anochite anya site nkụzi.
Departments nke oge a uche nke okwu adịghị. The ngalaba na-jikọrọ ya na onye nke a prọfesọ onye ziri a N'ezie nke okwu ihu ọha. Otú ọ dị, e nwere ndị ụfọdụ nnyocha oru na njikọ aka mahadum na Olee ihe enyemaka izu oke nke oge a echiche nke ngalaba ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Bara uru ná nzukọ ọmụmụ e ẹkenịmde na ndị a oru. Ha nwekwara adịgide adịgide ogige, na ngwá, mkpara na a n'ọbá akwụkwọ. na September 1894, a mahadum Archive e guzobere maka na ịchekwa akwụkwọ e bipụtara tupu 1848.
Ozizi mkpara na Lviv University gụnyere professors, ozizi, na-enyere aka na nkụzi. Ikike izi na mahadum (ma ọ bụ na-ahapụ ozizi) A pụrụ inweta nanị mgbe ha natasịworo doctorate, na emume habilitation na ihu ọma nke Ozi nke Education na Vienna. The size nke ngalaba mgbe niile ụba. E nwere nanị 27 nkụzi na 1850/51. Ọnụ ọgụgụ nke ndị nkụzi na ụba na- 169 na 1913/14. Ụmụ akwụkwọ na Lviv University na-ekewa ụfọdụ ige: nkịtị ụmụ akwụkwọ (nkịtị), pụrụ iche na ụmụ akwụkwọ (ndị pụrụ iche na) na afọ ofufo. Dị ka a na-achị, inyom bụ ndị gara okwu site nkwekọrịta na ndị nkụzi a na-akpọ afọ ofufo. na 1851, 699 ụmụ akwụkwọ na-amụ na Lviv University (na nsonye 302 na ngalaba nke Iwu, 89 na ngalaba nke Philosophy, 308 na Theological Faculty). na 1890/91, e nwere ndị na-ama 1255 (683, 189, 358 mmadụ ya). na 1900/01, ọnụ ọgụgụ ahụ mụbaruru 2060 ụmụ akwụkwọ (Iwu Ngalaba - 1284, Faculty of Philosophy -309, Faculty of Medicine - 127, Theological Faculty - 340). na 1913/14, ha dị 5871 ụmụ akwụkwọ (3493, 1229, 971 na 358 karị).
Na nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ, inyom mgba iji ike kwere ịga mahadum. na 1897, ndị inyom a na-ekwe na-amụ na ngalaba nke Philosophy, na na 1900, na ngalaba nke Medicine na Department of Pharmacy. Women ugboro ugboro choro ka e kwere ka na-amụ na Iwu Ngalaba, ma ndị ọchịchị agaghị ekwe ka nke a mee.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ugwo maka inwe ike na-amụ na mahadum. Ụmụ akwụkwọ nke Theological Faculty e kwere bụghị iji kwụọ ụgwọ maka ọmụmụ ha. Na ego ikike iche dị otú ahụ ùgwù na-enwe mmasị nanị site a akụkụ nke ụmụ akwụkwọ (na ụmụ akwụkwọ ndị gbara akwụkwọ a akwụkwọ nke ịda ogbenye na ihe ịga nke ọma gafere ọkara afọ agụmakwụkwọ mkparịta ụka). Na mgbakwunye na nkuzi, ụmụ akwụkwọ ugwo maka ule, mkparịta ụka, nzukọ ọmụmụ, na n'ihi na a na-ekwe na-eji ọbá akwụkwọ.
E nwekwara akwụkwọ scholarships. Scholarships na-ejiri ego tumadi na onyinye si ndị mmadụ n'otu n'otu. The kasị ama ndị na scholarships aha mgbe K. Ludwik, J. Slovak, YU. Tsalevych, Hayetskyi na ndị ọzọ. Ụmụ akwụkwọ nwere ike iji dormitories, ma ọnụ ọgụgụ nke ebe ndị ahụ amachaghị.
Na Iwu, Nkà ihe ọmụma na ikike iche Theological ọmụmụ were afọ anọ, na Medical ngalaba - ise, na Pharmaceutical Department nke Medical ngalaba - abụọ ma ọ bụ atọ. The agụmakwụkwọ e kewara abụọ semesters: oyi (October 1 ka March 20) na n'oge okpomọkụ (ọgwụgwụ nke April - ọgwụgwụ nke July) semesters. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ụzọ achị. Na 70s na-ezi mgbe nile ikike iche E duziri tumadi na German, Latin na Theological Faculty; isiokwu ole na ole ndị a kụziiri ke Ukraine na na Polish. on April 27, 1869 dị ka pụrụ iche iwu enyere site na Emperor, Polish e ghọtara dị ka ihe ukara asụsụ nọ n'ógbè. N'ihi ya, Polonization nwayọọ nwayọọ enịm ke. na 1870, 13 -achị na a kuziri na Polish, 46 na German, 13 na Latin, 7 ke Ukraine. on July 4, 1871, Emperor Franz Josef m nyere iwu-ekpochapụ mmachibido nkuzi na Polish na Ukraine asụsụ na Iwu ahụ na nkà ihe ọmụma ikike iche. Ya mere,, na 1906, 185 -achị na a kuziri na Polish, 5 na German, 14 na Latin, 19 ke Ukraine.
Na 1870s, Ivan Franko, a ma ama Ukrainian onye so dee, ọkà mmụta, nsụgharị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọha na eze ọnụ ọgụgụ na-amụ na nkà ihe ọmụma Faculty of Lviv University. Ọ bụ otu n'ime mmụta pụrụ iche nke Ukraine, onye banyere akụkọ ihe mere eme dị ka "Titan nke Labour."
Famous ọkà mmụta sayensị, dere, ọha na ọnụ ọgụgụ dị ka M.Pavlyk, O.Terletskyi, V.Navrotskyi, O.Makovey, Yu.Puzyna na ndị ọzọ nọrọ ha na-amụrụ afọ na anyị mahadum na ngwụsị iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
The nkà mmụta sayensị na ndụ nke Lviv University ná ngwụsị afọ iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ wara bukwanu mgbanwe. New achị e ẹkenam, ọhụrụ klas, laboratories e. Faculty òtù dere akwụkwọ na akwụkwọ ntuziaka dị ka nke ọma dị ka mụụrụ bara uru research, tumadi na ọdịdị ọmụmụ. Na ubi nke anụ ahụ na sayensị aha ndị ọkachamara V. Pierre, W. Urbanski, A. Handl, T. Staneck, m. Zakrzewski, M. Smoluchowski dị oké ọnụ ahịa na-asọpụrụ. Ọ kachasị, prọfesọ V. Pierre nwetara ngwá maka physics laabu nke e bibiri na 1848. W. Urbański bipụtara a dị mpịakọta abụọ akwụkwọ ọgụgụ Scientific Physics. na 1879, Prọfesọ nke Na Physics T. Staneck (1826-1891) bipụtara ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ on physics na mgbakọ na mwepụ. ebe ọ bụ na 1899, a ererimbot ama physics M. Smoluchowski (1872-1917) -arụ ọrụ na mahadum. Isi ọrụ nke o dere na-arụ ọrụ na mahadum na-"The Movement nke Gas ụmụ irighiri na njikọ na Theory nke mgbasa", "Na kinetic Theory nke Brownian molekụla Movement na Suspension".
prọfesọ m. Lemoch, W. Zmur, J. Puzyna, W. Sierpinski, na. Janiszewski-anọchite anya ala mgbakọ na mwepụ na sayensị na Lviv University. Bara uru Nkuzi on ndị bụ isi nke Geodesy site m. Lemoch, "On Mathematics" site W. Żmurko na mpịakọta abụọ "Theory nke analytic Ọrụ " site J. Puzyna ga-kwuru na nke a.
The mbụ ngalaba nke onwu e mepere Lviv University na 1801. The kasị pụta ìhè chemists nke oge ndị Prọfesọ B. Radziszewski (1838-1914) na Prọfesọ S. Opole (1886-1919), bụ onye na-ede akwụkwọ nke otu ihe dị mkpa akwụkwọ ọgụgụ na organic chemistry, nakwa dị ka B. Lachowicz, bụ onye Isi nke Department of Inorganic Chemistry ebe ọ bụ na ntọala ya siri na 1894 ka 1903, na S. Tołłoczko.
Geological Sciences e esịne ke ndepụta nke manye achị na ngalaba nke Philosophy na 1851. na 1852, Mineralogical Museum E mepere. na 1864, Ngalaba Mineralogy e tọrọ ntọala. Ọ na-gawa site F. compasses, nchoputa nke oge a na petrography na-ede akwụkwọ nke "The Handbook nke Petrography" (1838-1912).
Ná mmalite 1880s, na University Geography Department e guzobere, gawa site prọfesọ A. Reman (1840-1917), mara ọrụ ya na-ahụ ọdịdị ala nke Carpathians. A ịrịba onyinye mmepe nke Obodo Sciences e mere site E. Romer (1871-1954) na Ukraine geographer S. L. Rudnytskyi (1877-1937).
Ukraine-eme nchọpụta H. Velychko (doctorate na 1889) ekedi akpa doctoral akwụkwọ nke prọfesọ A. Reman.
na 1852, abụọ Ngalaba nke anụmanụ na Botany e na ndabere nke Department of Natural History. Mmepe nke anụmanụ na mahadum na-ejikọta isi na aha ndị na-esonụ a ma ama ndị ọkà mmụta sayensị: B. Dybowski (1833-1930), -ede akwụkwọ nke n'elu 350 na nkà mmụta sayensị akwụkwọ, prọfesọ J. Nusbaum-Hiliarowicz (1859-1917), nchoputa nke Polish ụlọ akwụkwọ nke evolutionists.
Historical sayensị na-ukwuu mepụtara na Lviv. The nchoputa nke Lviv akụkọ ihe mere eme akwụkwọ bụ X. Liske (1838-1891). T. Wojciechowski (1833-1919), The. Balzer (1858-1933), B. Dębiński (1858-1939) họọrọ n'etiti ọwọrọiso akụkọ ihe mere eme nke Lviv akwụkwọ nakwa dị ka L. Finkel (1858-1930), -ede akwụkwọ nke a atọ olu "A Bibliography nke Polish History" na "A History of Lviv University". site 1894 ka 1914, ndị ọhụrụ kere Department of General History na History of Eastern Europe na-aga site M. Hrushevskyi (1866-1934), otu nke kasị ukwuu akọ akụkọ ihe mere nke Ukraine, -ede akwụkwọ nke 10 mpịakọta ọrụ "A History of Ukraine-rus", ọtụtụ narị ọrụ na akụkọ ihe mere eme, edemede akụkọ ihe mere eme, historiography, isi iyi na-akatọ. M. Hrushevskyi bụkwa onye okike Ukraine akụkọ ihe mere eme akwụkwọ.
Iwu sayensị na nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ kpaliri site a warara empiricism na-amụkwu nke iwu nakwa dị ka akụkọ ihe mere eme na nkà ihe ọmụma na-achị. na 1862, abụọ ngalaba - na Department of Civil Iwu na Department of Criminal Iwu na Usoro - malite iji Ukrainian dị ka a asụsụ nke ntụziaka. Ọtụtụ ndị a ma ama ọkàiwu na-arụ ọrụ na Lviv mahadum: T. Pilat, E. ka, The. Ohonovskyi, M. Alerhant, The. Dolivskyi, M. Chlamtacz, S. Szachowski, P. Dąbkowski, J. Makarewicz, S. Dnistrianskyi na ndị ọzọ.
Ukrainian philology e kụziiri na mahadum ebe ọ bụ na 1848 mgbe Department of Ruthenian Philology -ata isi site Ya. Holovatskyi (1814-1888), -ede akwụkwọ nke ọrụ The Ụtọ asụsụ nke Ruthenian Language na Ndị mmadụ Songs nke Halychyna na Hungarian rus. na 1849, ya. Holovatskyi a họpụtara Rector nke mahadum. The. Ohonovskyi, The. Kolessa, K. Studynskyi, m. Sventsitskyi aka iso na-arụ ọrụ nke Ya.Holovatskyi. The. Ohonovskyi`s kasị ukwuu nweta bụ mpịakọta isii nke History of Ruthenian Literature.
The akụkọ ihe mere eme nke Polish akwụkwọ na mahadum jikọtara aha ndị ọkachamara A. Malecki (1821-1913), R. Pilat (1846-1906), W. Bruchnalski (1859-1938), K. Wojcechowski (1872-1924), B. Gubrynowicz (1870-1933), J.Kallenbach, J.Kleiner, W.Hahn na ndị ọzọ.
Oge gboo philology nwere oké omenala na Lviv University. Ma ama na-eme nnyocha ka L. Ćwikliński (1852-1942), B. Kruczkiewicz (1849-1919) na S. Witkowski (1866-1950) rụrụ ọrụ na ngalaba tupu 1918. N'ihi ha, Lviv ghọrọ a ma ama ebipụta center na ubi nke oge gboo philology. Okwu ihu ọha ndị Roman philology e nye ebe ọ bụ na 1918.
Dasịrị nke Austria na Hungary Alaeze Ukwu, Halychyna e weghaara Poland. on November 18, 1918, Ozi nke Nta na Education of Poland nyere a pụrụ iche iwu-ekwusa na Lviv University bụ ha ga na-n'okpuru ya akara. The University aha mgbe Polish Eze Jan Kazimierz. Polish bụ nanị ozizi asụsụ niile ezi ikike iche ma e wezụga n'ihi na Theological Faculty ebe ụfọdụ ọzụzụ e ziri na Latin. Niile ngalaba na Ukraine asụsụ e mechiri. N'ime abụọ ma ọ bụ atọ, Ukrainian ọkachamara na docents a chụrụ. Ukrainian ụmụ akwụkwọ na-ejedebeghị na ọnụ ọgụgụ klas ha nwere ike ịga.
University management dabeere na University iwu (ụkpụrụ nile nke 1924, 1929 na 1934). The Ọmụmụ Sineti, gawa site Rector, aka iso ya na-arụ ọrụ dị ka otu ukara. site 1924, na University gụnyere nke anọ ezi ikike iche. Dị ka iwu enyere site na Ministry on October 31, 1924, ngalaba nke Philosophy e kewara abụọ dị iche iche ikike iche: ngalaba nke Humanities na Faculty of Mathematics. Ná mmalite 1920, ha dị 55 ngalaba, 19 nkeji, 6 n'ụlọ ọgwụ, 2 polyclinics, ngalaba n'ọbá akwụkwọ, ndị ọkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ na-edebe ihe ochie nke University, na botanical gardens na Mahadum.
N'otu oge ahụ, na University enweghị ngalaba na Ukraine ozizi asụsụ, ọ dịghị prọfesọ nke Ukraine mba. na na 1933, docent m. Sventsitskyi nwetara a nri na-akụziri. In1928 / 29, Ngalaba Ukraine Philology e meghere, gawa site prọfesọ J. Janow.
The ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ na Lviv University bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Poland. site 1919/20 ka 1937/38, ha nọmba mụbara site ná 2,647 ka 5,026 people. Ụkpụrụ nke «numerus clausus» ke ẹkenam, dị ka nke Ukrainians nwere mgbochi mbanye mahadum ọmụmụ (bụghị ihe karịrị 15% nke na-achọ ịbata, okporo osisi na nke a enweghị ihe na-erughị 50%). Ihe agụmakwụkwọ ga-amalite na October 1 na-agwụ on June 30. Ọ na-e kewara 3 akụkụ, ma ọ bụ trimesters.
on April 23, 1923, Lviv University e bufere ulo nke mbụ Halychyna nzuko omeiwu, nke ghọrọ isi ụlọ nke University.
Na 1920-30s, Lviv University enweta ihe ịga nke ọma na ubi nke mgbakọ na mwepụ. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na mathematicians-amụ na mahadum: W. Sierpinski, H. Steinhaus, S. Ruziewicz, E. Żyliński (ebe ọ bụ na 1920), S. Banach (ebe ọ bụ na 1922), W. Niklibor na J. Schauder (ebe ọ bụ na 1927), S. Kaczmarz (ebe ọ bụ na 1929), W. Orlicz (ebe ọ bụ na 1934), H. Auerbach na S. Mazur (ebe ọ bụ na 1936). Ha kere a siri ike mgbakọ na mwepụ echiche-tank, mara dị ka "Lviv School of Mathematics". S. efefe n'elu (1892-1945), -ede akwụkwọ nke The Theory nke Linear Operations Fields, na-atụle ga isi ya.
Nkịtị sayensị nke oge a anọchi anya ya Prọfesọ R. Negrusz, S. Loria, L. Infeld, W. Rubinowicz na ndị ọzọ. prọfesọ E. Rybka, bụ onye duziri ndị dị na mbara igwe Observatory, -arụ ọrụ na ubi nke mbara igwe si 1932. S. Tołłoczko, V. Ishebiatovskyi, V. Kemula-anọchi anya rụzuru na ubi nke onwu. V. Kemula tinyere isi na Department of Physical Chemistry kere 1937.
Geological sayensị na-ozokwa mepụtara na mahadum. na 1921, Okanmuta. Z.Weyberg kere ma tinye isi na Department of Crystallography. Mgbe ya na ngalaba na-gawa site L. Chrobak. na 1924, Ngalaba Mineralogy na Petrography e hiwere, gawa site Okanmuta. J.Tokarski.
Geographic sayensị mepụtara n'okpuru nduzi nke a ma ama ọkà mmụta sayensị E.Romer. A.Zierhoffer-arụ ọrụ na ubi nke aku na uba na ọdịdị ala.
Na ndu nnyocha e mere nke prọfesọ J. Hirshler (1883-1951). E wezụga ya, B.Fuliński (1881-1942), H.Poliushynskyi, K.Sembrat, R.Kuntze, J. Noskiewicz, S.Piliavskyi, L.Monne, Ya.Romanyshyn rụrụ ọrụ ná Institute of anụmanụ.
na 1926, Ngalaba Comparative Anatomy ghọọ ndị Institute, nke e gawa site Okanmuta. K.Kwietniewski (1873-1942).
site 1918 ka 1924, ore fulawa T.Wilczyński na ọkà-geographer na paleobotanist M.Koczwara arụ ọrụ n'ụlọ Department of Botany. site 1924, ngalaba na-gawa site S. Kulchyńskyi. The nnyocha ọrụ na oge a nọ na-ejikọrọ na osisi (S. Kulchyńkyi, S.Tolpa, M.Kostyniuk, H.Koziy). The prọfesọ nke osisi physiology S.Krzemeniewski bụ a maara nke ọma ọkà mmụta sayensị.
Na interwar oge, ọhụrụ ngalaba na Medical ngalaba, Ngalaba Biology (1920), General Medicine (1932), emepụta ọgwụ Chemistry (1932), Health Care na History of Medicine (1930), microbiology (1936) e wee meghee.
Ọrụ nke J. Badian (1930-1937) na ubi nke Cytology nke bacteria merie n'ụwa nile ude. J.Lenartowicz bụ a maara nke ọma dematọlọjist. na 1936, N. Gąsiorowski haziri ma tinye isi Ngalaba Microbiology. prọfesọ R.Weigl (1883-1957) bụ ndị kasị ama ọgwụ microbiologist. site 1922, Ngalaba n'ihi mmiri ọgwụ na-aga site J. Parnas.
Lviv-Warsaw School of Philosophy e maara nke ọma n'ebe ndị dị anya Poland. Ọ e tọrọ ntọala site K. Twardowski (1866-1938). E nwekwara Polish nkà ihe ọmụma Society na-arụ ọrụ n'ime Lviv University nke ulo oru nza nke akwụkwọ. Ndị ọkà mmụta sayensị Ya.Łukasiewicz, A.Tarski, I.Dąbska, S.Lushchevska, H.Melberh, L. Chwistek, M.Borovskyi, R.Ingarden, L.Blaustein na ndị ọzọ so Lviv-Warsaw School of Philosophy.
Historical nnyocha e nọchiri anya ya a ma ama na-eme nnyocha K. Chiliński (1880-1938), J. Ptaśnik (1876-1930), E. Modelski (1881-1966), F. mkpatụ-oche (1875-1953) na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na akụkọ ihe mere eme nke iwu, e rụrụ ọrụ professors O.Balzer, P.Dąbkowski, docent K.Koranyi; Okanmuta. M.Allerhand, K.Stefko, E.Tiell, A.Doliński-arụ ọrụ na ubi nke obodo iwu na usoro, J.Markewicz (ekperima iwu), Okanmuta. P.Ehrlich (mba ọha iwu).
Polish Studies bụ otu nke na-eduga ubi. E.Kucharski na K.Kolbuszewski wee na-arụ ọrụ na ubi. Asụsụ akụkọ ihe mere eme nke Polish Studies nke oge a na-ejikọta ya na aha ndị A. Kalina, A. Kryński, K. Nitsch, H.Ulaszyn, H.Hartner na obere R.Pilat na W.Bruchnalski. The kasị oké ọnụ ahịa ọrụ nke oge a na-agụnye a n'akwụkwọ site na H.Hartner (1892-1935) Ụtọ asụsụ nke Contemporary Polish Language.
Ukrainian philology na mahadum e anọchi anya ya Okanmuta. J.Janów, oge gboo philology site Okanmuta. S.Vitkovskyi na R.Ganszyniec (1888-1958), Germany ọmụmụ site Z.Czerny.
na 1925-1935, na Ngalaba nke Arabic, Hebrew, Aramaic, Turkish, Mongolian, Indian, Iranian Philology na Department of the History nke East arụ ọrụ na Mahadum. Prof. M.Sharr, Okanmuta. Z.Smogorzewski, Okanmuta. W.Kotwicz, Okanmuta. G.Blatt, A.Tavaronskyi na J. Kurylowicz sokwa ná ndị a maara nke ọma Orientalists na ndị ọkà mmụta asụsụ.
Dị ka nzuzo protocol nke nkwekọrịta n'etiti Germany na Soviet Union, on August 23, 1939, West Ukraine ghọrọ mpaghara n'okpuru Soviet Union mmetụta. on September 22, Agha Soviet banyere Lviv. on October 26, 1939, Ndị Mmadụ Assembly nke Western Ukraine kwuru mkpọsa nke Soviet ike.
N'oge a, Lviv University wara oké mgbanwe. N'okpuru Charter nke Higher Education nke USSR, buu nzukọ nhazigharị nke mahadum dị ka ihe alụmdi agụmakwụkwọ ka elu n'efu na free akụziri ụmụ amaala niile e mere. The Theological Faculty e tutu amama. Emepụta ọgwụ na Medical ngalaba e reorganized n'ime a Medical School. na October 1939, ọhụrụ ngalaba e guzobere gụnyere Departments nke History of Marxism-Leninism, Dialectical na Historical Ịhụ Ihe Onwunwe n'Anya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị Economy, Ukraine Language, Ukrainian Literature, Russian Language, Russian Literature, na History nke USSR, na History of Ukraine na nke Nkịtị Education. Ukwuu-ruru eru nkụzi nọ ịkụziri eto eto na-na ndabere nke Marxist-Leninist echiche na ihe worldview.
on Dec 2, 1940, na University Council mma ọhụrụ University ukpuru, nke kwuru na ụmụ amaala niile nwere ikike na-amụ na mahadum n'agbanyeghị ọnọdụ ha ndabere, okike, agbụrụ na mba.
Famous ọkà mmụta sayensị na a kpọrọ-arụ ọrụ na mahadum. N'etiti ha, e nwere ndị odeakụkọ ihe mere eme M. Vozniak, edemede critic V.Shchurat, folklorist na musicologist F. Kolessa, onye edemede na-ede akwụkwọ critic M.Rudnytskyi, ọkọ akụkọ ihe mere m. Krypyakevych, a mgbakọ na mwepụ M.Zarytskyi na ndị ọzọ. The Ndị mmadụ Commissariat nke Education òkù ịbịa 45 -eme nnyocha si Kyiv na Kharkiv. Ọkọ akụkọ ihe mere, docent M.Marchenko a họpụtara Rector.
Dị ka iwu enyere site na Presidium nke Onye Kasị Elu Council nke USSR on January 8, 1940, aha a ma ama Ukrainian edemede na thinker Ivan Franko nyere on Lviv University.
on January 15, 1940, mahadum malitere na-arụ ọrụ dị ka a ọhụrụ curricula dabeere na mma ukpuru. O nwere ise ezi ikike iche: akụkọ ihe mere eme, philological (Ngalaba nke Ukraine asụsụ na Literature, Slavic Philology, Romano-Germany Philology), ngalaba nke Iwu, ngalaba nke Physics na Mathematics (Departments of Mathematics, arụzi ụgbọala, physics), ngalaba nke Natural Science (Ngalaba nke Biology, Chemistry, Geography, geology). The ọhụrụ abụọ governing ozu a kpụrụ: agụmakwụkwọ Council nke mahadum na ngalaba kansul. Ha kpebiri ajụjụ agụmakwụkwọ, ụkpụrụ, na nkà mmụta sayensị ọrụ nakwa dị ka edunye na nkà mmụta sayensị degrees na utu aha agụmakwụkwọ. A ngalaba nọgidere na isi ezi ihe ma na research unit. na 1940, ha dị 52 ngalaba. Ha rụrụ ọzụzụ omume, mepere emepe ọmụmụ, pụrụ iche nzukọ ọmụmụ na ezi ihe, ekenịmde research.
Na ikike iche nke Humanities ọmụmụ were afọ anọ na na ikike iche nke eke sayensị afọ ise. na 1940, extramural ọmụmụ e ẹkenam na ikike iche nke History, Philology, Natural Science, na Mathematics. A alaka nke Union Mmekorita Institute of Law E mepere na Iwu Ngalaba.
The mbụ na nkà mmụta sayensị nnọkọ nke ndị nkụzi ẹkenịmde ke January-February 1941. na April, akpa Student Conference ẹkenịmde. na 1940, na Postgraduate ngalaba e meghere.
Otú ọ dị, ọrụ kwụsịrị na German wakporo Soviet Union na mbuso agha nke agha Nazi on June 30, 1941. Ke akpa 70 ụbọchị, eminent ọkà mmụta sayensị nke mahadum, Polytechnic na ọrụ ahụ ike e jidere, na mgbe n'iti na ókè gbara ndị dị gburugburu nke ugbu a Sakharova Street . ma ama na ndị ọkà mmụta, gụnyere T.Boj-Żeleński, R. Longchamps Berier, M. ụdị, H. Auerbakh, S. ihe, sokwa ná ndị gburu.
na 1942, Germany na-arụ ọchịchị emechi elu agụmakwụkwọ njikọ na Ukraine. Ndị mwakpo ahụ bukọọrọ ma bibie ihe onwunwe nke ndị University. The ngwá, bụ nke ndị laboratories na ikike iche of Physics, Mgbakọ na mwepụ, na Chemistry dị ka nke ọma dị ka ọbá akwụkwọ na Department of akụkọ ifo na-Ethnography Nọmba 15 puku mpịakọta, e exported ka Germany. Isi ọgụgụ ulo ke mahadum na nkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ e bibiri na mpịakọta nke bara uru akwụkwọ, dị ka puku ise akwụkwọ ochie na incunabula na 500 bara uru odide e wepụwo.
The mweghachi nke University malitere ozugbo obodo a tọhapụrụ site agha Nazi. on July 30, 1944, a nzute ẹkenịmde ke University, ebe ndị sonyere (127 nkụzi, na-ọrụaka ọrụ) rịọrọ ndị intelligentsia isonye ifịk ifịk ke iwughachi na ụba, muta, omenala na agụmakwụkwọ njikọ nke obodo.
N'oge nkera nke abụọ nke 1944 na akpa ọkara nke 1945, tumadi na-enyemaka nke ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi, ọtụtụ mahadum ụlọ refurbished gụnyere Faculty of Biology on 4 Shcherbakova Street (ugbu a Hrushevskoho Street), na ikike iche nke Chemistry na Physics na 6 na 8 Lomonosova Street (ugbu a Cyril na Methodius Street). The nnyocha Ọbá akwụkwọ na ụlọ mbikọ on 7 Hertsena Street e rụzigharịa. The nkà mmụta mbara igwe Observatory na botanical ubi na-emezughị wughachi.
Mgbe ihe karịrị afọ atọ ezumike, on 15 October 1944, 194 nke abụọ, atọ na nke anọ n'afọ ụmụ akwụkwọ malitere ha ọmụmụ na mahadum. 226 afọ mbụ ụmụ akwụkwọ malitere ha ọzụzụ on November 1, 1944. Onye pụrụ idebanye aha na mahadum ọbụna mgbe mmalite nke ihe agụmakwụkwọ. Ruo mgbe ọgwụgwụ nke March 1945, 799 ụmụ akwụkwọ na-amụ na mahadum. Methodological noo, na nkà mmụta mbara igwe Observatory, na botanical gardens, ndị ọkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ, geological na botanical ngosi ihe mgbe ochie maliteghachiri ọrụ ha.
na 1948, prọfesọ H.Savin, a ma ama ọkà mmụta sayensị na ubi nke na-arụzi ụgbọala, a họpụtara Rector nke University. site 1951 ka 1963, na University na-aga site Ye.Lazarenko, a geologist, ma ama ọkà mmụta sayensị, prọfesọ, kwekọrọ ekwekọ òtù nke USSR Academy nke Sciences, Academician nke USSR Academy nke Sciences. site 1963 ka 1981, prọfesọ M.Maksymovych, a ọkà mmụta sayensị na windo mkpali nnyemiwu, bụ a Rector, na 1981-1990 - Prọfesọ V.Chuhayov, a na-eme nchọpụta na ubi nke akụkọ ihe mere eme.
Mgbe agha mgbanwe aka iso. na 1945, ngalaba nke Chemistry na anọ ngalaba e guzobere. Ná ngwụsị nke 1950, ngalaba nke Foreign Asụsụ e hiwere. N'ihi ya, e nwere nanị itoolu mahadum ikike iche. N'otu oge ahụ, ọhụrụ ngalaba e meghere, ha ọnụ ọgụgụ ahụ mụbaruru 71. na 1953, ngalaba nke Physics na Mathematics E kewara ngalaba nke na-arụzi ụgbọala na Mathematics na Faculty of Physics. na 1975, ngalaba nke na-arụzi ụgbọala na Mathematics E kewara ngalaba nke Mathematics na ngalaba nke Applied Mathematics na-arụzi ụgbọala .
na 1959, na University si General Department of Foreign Asụsụ (English na German) e guzobere maka ịkụziri asụ asụsụ ọzọ na-abụghị ndị pụrụ iche na ikike iche.
na 1953, Ngalaba Journalism e meghere dị ka akụkụ nke ngalaba nke Philology. n'afọ ọzọ, ya a haziri Òtù ngalaba nke Journalism.
na 1966, ngalaba nke Economics E guzobere na ndabere nke Lviv alaka nke Kyiv Institute of National Economy. O nwere ndị na-esonụ ngalaba: Economics, Òtù na Planning nke Economy, Finance, Accounting na Statistics, Mathematical Ụzọ na Economics.
na 1975/76, mahadum nwere 13 ikike iche. N'otu agụmakwụkwọ, nke preparatory ngalaba maka ụmụ amaala obodo ọzọ e hiwere. O nwere ndị Department nke Russian Language na Department of Natural Science.
Ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ndị ezi ikike iche, ngalaba, mmepe nke ọhụrụ nnyocha ebe na mma nke muta usoro na njikọ na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na-enwe ọganihu dị mkpa mmeba nke mahadum ụlọ ọrụ. na 1950/51, na University nwere 12 agụmakwụkwọ ụlọ na ngụkọta nke ebe nke 42.8 puku sq. m, na na 1959-1962, na-arụ ọrụ ebe e ụba ruru ka ntaghari ohuru nke Department of Chemistry na Lomonosova Street. Ná ngwụsị afọ 50 - N'oge 60, mahadum natara a ọnụ ụlọ dị Sichovykh Striltsiv Street (mbụ September 17 Street), nke chọpụtara na-amụrụ Ọbá akwụkwọ, ngalaba nke Geography na ngalaba nke Iwu na ọtụtụ onwe laboratories. na 1966, mahadum e nyere ụlọ on Svobody Avenue 18, nke chọpụtara na Faculty of Economics. na 1971, ngalaba nke Physics e nyere ọhụrụ ogige on Drahomanova Street. na 1984, ọzọ ụlọ na otu n'okporo ámá e nyere mahadum. na 1984, ebe nke mahadum ogige nke dị n'elu 55 puku sq. m.
The botanical gardens bụ n'etiti ndị kasị ochie agba nke University. na 1957-1959, a atụmatụ maka ya mmepe e arụ ọrụ. The botanical gardens e kewara abụọ akụkụ: ngalaba nke osisi iwebata na ngalaba nke osisi physiology. na 1970, ọ natara ọnọdụ nke a na nkà mmụta sayensị na alụmdi.
The ọkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ nke mahadum ekere òkè dị mkpa na izi usoro na research. N'oge post-agha afọ, ya collection of isi mmalite ụba ọ fọrọ nke nta site 5 ugboro. na 1985, ya ego karịa 2 700 puku nkeji.
Mmepe nke izi, methodical na nkà mmụta sayensị na-eme nke University e mee ka site e kere eke nke a nụrụ ụlọ na 1947. Site na iji nke Minista Higher Education nke USSR na April 1957, ya e reorganized n'ime statutory ebipụta ụlọ nke Lviv University. Ọ arụ ọrụ dị ka a bughi unit nke mahadum ruo mgbe 1968 (ekemende reorganized n'ime ebipụta akwụkwọ n'ụlọ ebipụta mkpakọrịta "High School" na Lviv University, na na 1989, ya e reorganized n'ime otu nọọrọ onwe ha ebipụta ụlọ "Svit"). na 1948, a ga-ede "Scientific Notes" e butere, nke gosiri nnyocha sayensị na-eme na ikike iche. ebe ọ bụ na 1962, magazin ikọwọrọ n'okpuru aha nke Naukovi Zapysky (Na obodo nke Lviv University). Ụmụ akwụkwọ na-adịghị na-agara si ebipụta eme. Atọ mbipụta nke na-amụrụ "Almanac" (1954, 1956, 1958) wee si. A ukwuu nke Akwụkwọ na instructional ihe ndị e biri ebi na mahadum dechapụ igwe laabu kere 1959.
N'oge post-agha afọ, mahadum kpụrụ otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị ukwuu ruru eru. site 1946 ka 1965, mahadum ọrụ gbachiteere 53 doctoral dissertations, na 52 e gbachiteere na oge site na 1965 ka 1975. site 1946 ka 1975, 842 adian e gbachiteere. Prọfesọ mahadum na a hoputara na-ahọpụta dị ka academicians na kwekọrọ ekwekọ òtù nke USSR na ọdịda asọpụrụ degrees. Nke a na-egosi na izugbe ude nke bara uru mere ka sayensị. Ọ kachasị, na 1948, professors O.Vyalov, B.Hniedenko, H.Savin, na 1958, prọfesọ m. Krypyakevych bụ ndị so USSR Academy nke Sciences. na 1961, prọfesọ V.Soboliev ghọrọ onye òtù nke USSR Academy nke Sciences. University gụchara akwụkwọ na O.Parasiuk, Ya.Pidstryhach, I.Yukhnovskyi, V.Panasiuk, R.Kucher, M.Brodin, Ye.Fradkin so ná ndị òtù nke National Academy of Science. Famous Ukrainian dere R.Bratun, D.Pavlychko, R.Ivanychuk, R.Fedoriv, V.Luchuk-amụ na University.
Ke 1950s na 60s, research ìgwè ndị a kpụrụ na ngalaba na ikike iche. Nke a nyere ntọala maka mmepe nke nkà mmụta sayensị na ubi, gụnyere ozizi plasticity na ike, esi arụmarụ, usoro iwu mineralogy, anụ ahụ na nke chemical analysis nke metal, mba aku onwunwe na omenala nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ n'ógbè ndị USSR, akụkọ ihe mere eme na omenala agbatị n'etiti Slavic mba. Mmepe nke ọtụtụ n'ime ndị a ọzụzụ na-eso afọ kọwaa na nkà mmụta sayensị okporo ụzọ nile nke Lviv University. Na 1960-70s, ala research achị achikota site USSR nke ukwuu gbasaa. Ajụjụ nke aku na uba na contracts nwayọọ nwayọọ bata ndụ.
Arọ na arọ, ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ debara aha na mbụ n'afọ nke mahadum ụba. Nke a so mee ka ndị e kere eke nke ọhụrụ ngalaba. na 1950, 575 ndị mmadụ banyere mahadum dị ka afọ mbụ ụmụ akwụkwọ, na 1970, ha ọnụ ọgụgụ ahụ mụbaruru 1100, na 1985, ka ihe karịrị 1,300 people. na 1947/48, akụkụ-oge ọrụ malitere na-arụ ọrụ, ikwe na-enweta agụmakwụkwọ ka elu na-arụ ọrụ n'otu oge. na 1951-1953, extramural mahadum ọmụmụ e hiwere ulo oru. 300-325 mmadụ debara aha na N'ezie. na 1965, ha na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu dịrị fọrọ nke nta 1,200 people. na 1959, mahadum malitere mbanye nke ụmụ akwụkwọ maka mgbede ọmụmụ nke Ukraine asụsụ na akwụkwọ, akụkọ ihe mere eme, physics, mgbakọ na mwepụ, chemistry. na 1960-1962, mgbede ọmụmụ nke iwu, na Russian asụsụ na akwụkwọ, English na German, bayoloji e kwukwara; na 1963-1965 - Radio physics na ngwá electronic, mgbakọ mgbakọ na mwepụ, n'ihi mmiri ọgwụ; na 1966 - Atụmatụ nke aku na uba na ụlọ ọrụ, aza ajụjụ; na 1970 - Nzukọ nke ígwè nhazi nke aku ọmụma. Admission ke akpa mgbede ọzụzụ ọmụmụ na afọ ndị ahụ bụ 300-350 ndị mmadụ kwa afọ. Mgbede ọmụmụ kwụsị na 1992.
site 1969 ka 1996/97, preparatory ọmụmụ nke zụrụ azụ na-eto eto na mahadum arụ ọrụ na Mahadum. ebe ọ bụ na 1971, na University na-agba ọzụzụ na mmughari. ebe ọ bụ na 1989, 5,998 ndị ọkọ nke abụọ isi na Institute for Advanced Studies na Training.
Mkpọsa nke onwe nke Ukraine bụ a ọhụrụ na peeji nke na akụkọ ihe mere eme nke Lviv University. na 1990, mahadum na-aga site University Prọfesọ, Doctor nke Science Ivan Vakarchuk. N'ihi na mmejuputa nnukwu-ọnụ ọgụgụ izi mgbanwe, ọhụrụ n'ahụ na ngalaba e meghere. na 1992, ngalaba nke International Relations, Faculty of Philosophy meghere; na 1997, Ngalaba Nga mahadum Training. na 1992, Institute nke Historical Research, gawa site Doctor nke History Ya. Hrytsak e tọrọ ntọala. ebe ọ bụ na 1997, ndị na-esonụ mahadum ngalaba e guzobere, gụnyere Iwu College, na Humanities Research Centre, na Institute of edemede Studies, na Centre maka Italian Language na Culture. ebe ọ bụ na 1978, e nwere na-aga n'ihu mmekota na Lviv Regional Junior Academy of Sciences, nke kwa afọ nwere banyere 1,000 ụmụ akwụkwọ. The University esetịpụ ọmụmụ, okwu, research noo maka ụmụ akwụkwọ n'okpuru nduzi nke ndị ọkà mmụta.
on October 11, 1999, site Iwu nke President nke Ukraine na Ivan Franko Lviv State University e nyere ọnọdụ nke "National".
Ugbu a, Lviv University na-atụle otu n'ime ihe ndị kasị prestigious oru nke mba anyị. Ọ nweela elu mba ùgwù ma ghọọ onye dị ike na nkà mmụta sayensị center.
Na pediment nke isi ụlọ nke Lviv University e nwere slogan: "The mba ebe maka agụmakwụkwọ nke ụmụ amaala" (gụrụ akwụkwọ ụmụ amaala, ebube nke nna). The mahadum obodo-arụsi ọrụ ike iji mee ka echiche a si mezuo. The mgbanwe nke University n'ime a oge a na European alụmdi na ichebe ndị kasị mma na mba agụmakwụkwọ omenala bụ isi ihe mgbaru ọsọ nke mahadum obodo.
Ị chọrọ -atụle Ivan Franko National University nke Lviv ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Ivan Franko National University nke Lviv on Map
Ivan Franko National University nke Lviv reviews
Jikọọ na-atụle nke Ivan Franko National University nke Lviv.
Pryazovskyi State Nka na ụzụ University Mariupol